ဝတ်အိပ်မလား...... ချွတ်အိပ်မလား....... ဘရာ - Hello Sayarwon
ဝတ်အိပ်မလား...... ချွတ်အိပ်မလား....... ဘရာ
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 24/09/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ညအိပ်ချိန်ဆိုတာ တစ်နေကုန် ပင်ပန်းခဲ့သမျှကို ဖြေဖျောက်ပြီး အင်အားတွေပြည့်စေဖို့ အနားယူချိန်ပါ။ ညအိပ်ချိန်မှာ အရေပြားဆဲလ်လေးတွေက အသက်ဝဝ ရှူရင်း အသစ်တွေ ဖြစ်ပေါ်နေသလို ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်း အနားယူနေတာပါ။ ဒီလို အချိန်မှာ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်ဖို့က အတော်လေး အရေးကြီးပါတယ်။
ညအိပ်ချိန်မှာ သက်သောင့်သက်သာ မဖြစ်တာက အိပ်စက်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သလို အိပ်ရေးမဝတာတွေက စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လေဒီလေးတို့ ညအိပ်တဲ့အခါ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေဖို့အတွက် ဘရာ ဝတ်အိပ်ရမလား။ ချွတ်အိပ်ရမလားဆိုတာလေးကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
ဝတ်အိပ်မလား…… ချွတ်အိပ်မလား……. ဘရာ
ညအိပ်တဲ့အခါ ဘရာ ဝတ်အိပ်တာက ရင်သားဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထိခိုက်စေတယ်။ ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ပြောဆိုမှုတွေကို ကြားဖူးနိုင်သလို ဘရာဝတ်အိပ်တာက ရင်သားတွဲမကျအောင် ထောက်ကူပေးတယ်ဆိုတဲ့ စကားတွေကိုလည်း ကြားဖူးမယ် ထင်ပါတယ်။
ညဘက် အိပ်တဲ့အခါ ဘရာဝတ်အိပ်တာကြောင့် ကောင်းကျိုးတွေရှိသလို ဘရာချွတ် အိပ်တာကြောင့်လည်း ရရှိနိုင်မယ့် ကောင်းကျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါတွေက ဘာတွေ ဖြစ်မလဲဆိုတာကို အတူတူ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
ညဘက် ဘရာ ဝတ်အိပ်တဲ့အခါ
ညဘက်အိပ်တဲ့အခါ ဘရာဝတ်အိပ်တာက ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာမျိုး မရှိသလို ကျန်းမာရေးကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ထိခိုက်စေတာမျိုး မရှိနိုင်ပါဘူးလို့ လေ့လာမှုတွေအရ သိရပါတယ်။
ရင်သားကြီးသူတွေအနေနဲ့ကတော့ ညအိပ်တဲ့အခါ ဘရာဝတ်အိပ်တာက အိပ်စက်ချိန်မှာ ရင်သား လှုပ်ရှားမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး ရင်သားနာကျင်တာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရင်သားလှုပ်ရှားမှုကြောင့် ရင်သား ထိခိုက်နိုင်ခြေကိုလည်း အတော်လေး လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ညဘက်အိပ်တဲ့အခါ ဘရာ ဝတ်အိပ်တာက ရင်သား တွဲကျတာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်ပေးနိုင်တာပါ။
ဒါပေမယ့် ညအိပ်တဲ့အခါ ဘရာ ဝတ်အိပ်မယ်ဆိုရင် သတိထားရမှာက ချောင်ချောင်ချိချိနဲ့ လေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့ ချည်သားဘရာ ခပ်ပျော့ပျော့လေး ဖြစ်ဖို့တော့ လိုပါမယ်။
ဒါလေးတွေက အားသာချက်ဆိုပေမယ့် ညအိပ်တဲ့အခါ ဘရာဝတ်အိပ်မယ်ဆိုရင် အခုလို အဆင်မပြေတာလေးတွေတော့ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ညဘက်အိပ်တဲ့အခါ ဘရာကို ခပ်တင်းတင်း ဝတ်ဆင်မယ်ဆိုရင်တော့
အိပ်ရတာ သက်သောင့်သက်သာ မရှိတာမျိုး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
တင်းတင်းကျပ်ကျပ် စည်းနှောင်ထားသလို ဖြစ်ပြီး နေရထိုင်ရတာ သက်သောင့်သက်သာ မဖြစ်တာကြောင့် ကောင်းမွန်ပြည့်ဝတဲ့ အိပ်စက်မှုကို မရရှိတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အရေပြားကို စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
ညဘက်အိပ်တဲ့အခါ ဘရာဝတ်အိပ်တာက အရေပြားတွေကို ပွန်းစေနိုင်ပြီး အရေပြားတွေကို နာကျင်စေတာမျိုး ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
အရေပြားမှာ အညိုအမည်း စွဲစေနိုင်တယ်။
ဘရာကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဝတ်အိပ်တာက အရေပြားပွန်းစေတာကြောင့် မယ်လ်လာနင် ထွက်ရှိမှုကို မြင့်တက်စေပြီး အရေပြားမှာ အရောင်ရင့်တာ၊ အညိုအမည်း ထင်းတာလိုမျိုး အရေပြားပြဿနာတွေကို ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
ညအိပ်တဲ့အခါ ဘရာဝတ်အိပ်တာက ဘရာဝတ်ထားတဲ့နေရာတဝိုက်မှာ ချွေးအိုက်တာမျိုးဖြစ်စေပြီး မှိုပိုးတွေ ပေါက်ဖွားလွယ်နိုင်ပါတယ်။ အရေပြားမှာ မှိုစွဲတာလိုမျိုး အရေပြား ပြဿနာကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အဆိပ်အတောက် ဖယ်ရှားမှုမှာ အဟန့်အတား ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
ညဘက်မှာ ဘရာ ဝတ်အိပ်တာက ပြန်ရည်ကြောစနစ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး ကိုယ်တွင်းက အဆိပ်အတောက်တွေ ဖယ်ရှားမှုကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
သွေးစီးဆင်းမှုကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
ညဘက်အိပ်တဲ့အခါ ဘရာ ခပ်တင်းတင်း ဝတ်ထားတာက ရင်သားတဝိုက် သွေးစီးဆင်းမှုကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အသက်ရှူရတာလည်း အဆင်မပြေတာမျိုး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ညဘက်ကို ဘရာ ချွတ်အိပ်တဲ့အခါ
ညဘက်ကို သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်စေဖို့အတွက် ဘရာ ချွတ်အိပ်တဲ့အခါ အခုလို အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကို ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
အသက်ရှူရတာ သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေတယ်။
လှဲအိပ်လိုက်တဲ့အခါ လေပြွန် အထက်ပိုင်းက ပုံမှန် အနေအထားထက် ကျဉ်းသွားတတ်ပါတယ်။ ဒီအနေအထားက အဆုတ်တွေဆီကို လေရောက်ရှိဖို့ ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို အနေအထားမှာ ဘရာကို ခပ်တင်းတင်း ဝတ်ဆင်ထားတာက နံရိုးတွေကို လေရှူချိန်မှာ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ပြန့်ကားခွင့် မရစေဘဲ အသက်ရှူ မဝတာမျိုး ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ညအိပ်တဲ့အခါ ဘရာချွတ်အိပ်မယ်ဆိုရင် အသက်ရှူရတာ သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်စေမှာပါ။ ကိုယ်တွင်းမှာလည်း အောက်ဆီဂျင် ပိုမို ရရှိစေနိုင်တာကြောင့် ညဘက်မှာ ပိုမို အိပ်ပျော်စေမှာပါ။
ပူအိုက်တဲ့ ရာသီတွေမှာဆိုရင် ချွေးတွေထွက်တာကြောင့် ဘရာတဝိုက်မှာ ချွေးတွေ စိုထိုင်းထိုင်းဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ်နံ့ပြင်းတာ၊ ဝက်ခြံထွက်တာလိုမျိုး ပြဿနာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ညဘက်အိပ်တဲ့အခါ ဘရာချွတ်အိပ်မယ်ဆိုရင် အရေပြားကို ချွေးကြောင့် ထိခိုက်မှုတွေကနေ အကောင်းဆုံး ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရေပြား ထိခိုက်မှု ကင်းစေမယ်။
ဘရာက ချိတ်၊ ကြယ်သီးစတာတွေက အရေပြားကို ပွန်းပဲ့စေနိုင်သလို ဘရာက အသားကြမ်းမယ်ဆိုခဲ့ရင်လည်း ညအိပ်တဲ့အခါ အသားနဲ့ ပွတ်တိုက်မိပြီး ပွန်းပဲ့တာမျိုး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ညအိပ်တဲ့အခါ ဘရာ ချွတ်အိပ်လိုက်တာက ဒီပြဿနာကို ကင်းဝေးစေမှာပါ။
အားသာချက် အားနည်းချက်လေးတွေကို ပြောပြပြီးပြီဆိုတော့ ညအိပ်တဲ့အခါ ဘရာကို ဝတ်အိပ်မလား……. ချွတ်အိပ်မလား ………. ဆိုတာကိုတော့ ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ လေဒီလေးတို့ရေ…………….
WearingaBra at Night: Is Sleeping inaBra Harmful? https://flo.health/menstrual-cycle/lifestyle/sleep/sleeping-in-bra Accessed Date 16 September 2021
10 Important Reasons Why You Shouldn’t WearaBra to Bed https://parenting.firstcry.com/articles/magazine-10-important-reasons-why-you-shouldnt-wear-a-bra-to-bed/ Accessed Date 16 September 2021
ဘရာ Size မှားနေပြီလား
ကျန်းမာရေးအတွက် ဘရာ လျှော့ဝတ်ကြမယ်
အားကစားလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် အားကစားသုံးဘရာစီယာ (Sport bra) ကို မဖြစ်မနေ ဝတ်ပါ။
ဘရာစီယာကို ဘယ်လောက်နေရင် တစ်ခါလျှော်သင့်လဲ